တရုတ်နိုင်ငံ၊ စီချွမ်ပြည်နယ်၊ ဟွေလီဒေသကြီးရဲ့ အစိုးရပိုင်အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ ကွန်ပြူတာအထူးပြု
ချက်ဖြင့် ဓါတ်ပုံပြုလုပ်လိမ်လည်သတင်းဖော်ပြခဲ့ မှုအပေါ်တရုတ်နိုင်ငံမှ အင်တာနက်အသုံးပြုသူတစ်ဦး
ရုတ်တရက်ကြည့် ယင်တော့ နည်းပညာမကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်အစစ်အမှန်လို့ ထင်ရပေမယ့် ပုံထဲမှာ
နေ့ ခင်းကြောင်တောင်အချိန်မှာတောင် လူတွေရဲ့ အရိပ်မပါတာနဲ့ တင် ဖိုတိုရှော့ နဲ့ ဖန်တီးထားတယ်ဆို
လိမ်နိုင်ညာနိုင်လွန်းတဲ့ ကျွန်တော့ နယ်မှအစိုးရ၀ါဒဖြန့် ဓါတ်ပုံ (ဟွေလီဒေသအစိုးရအင်တာနက် စာမျက်နှာမှာတော့ ထိုလိမ်လည်လှည့် ဖြားမှုအတွက် ပြည်သူလူထုကိုတရားဝင်တောင်းပန်ခဲ့ ပါ
ယနေ့ အလုပ်မည်မည်ရရလုပ်စရာမရှိတာနဲ့ ကျွန်တော့် ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ တရားဝင်အင်တာနက်စာ
မျက်နှာ၊ ၀က်ဘ်ဆိုဒ် ကိုသွားရောက်ကြည့် ရှုလေ့ လာခဲ့ ပါတယ်...
ရှေ့ ဆုံးမျက်နှာစာမှာပဲ တောလက်ကျေးရွာနယ်လေးမှာ အဆင့် မြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်တည်ဆောက်
ထားသည့် လမ်းအကြောင်းသတင်းမို့ ထိုသတင်းခေါင်းစဉ်ကို ကလစ်လုပ်ပြီးဓါတ်ပုံကိုကြည့် လိုက်မိတဲ့ 
အခါမှာတော့ သွေးအန်ချင်လောက်အောင်ကို အော့ နှလုံးနာမိပါတော့ တယ်...
ဒီလိုဖန်တီးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံမျိူးကတော့ ကျွန်တော်လို သာမန်နားလည်သူတောင် ဖိုတိုရှော့ ( ကွန်ပြူတာ
နည်းပညာဖြင့် ပြုပြင်ဖန်တီးထားသည့် ဓါတ်ပုံ ) နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံဆိုတာ အသေအချာပြောနိုင်ပါ
တယ်...ပြီးတော့ ၎င်းတို့ ( ပြည်နယ်အစိုးရ၊တာဝန်ရှိသူတွေ ) က ဒီပုံကိုမှ ရှေ့ ဆုံးမျက်နှာစာမှာ အရေး
ကြီးဆုံး၊ အဓိကကျဆုံးသတင်းအဖြစ်ဖော်ပြဖို့ တောင်မှ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြပါသေးတယ်...
ပုံစံကြည့် ရတာတော့ သူတို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (သတင်းစာ) ကိုဘယ်သူမှ (စိတ်ဝင်တစား) လာမကြည့် ကြ
ဘူးဆိုတာသူတို့ စဉ်းစားမိခဲ့ ကြပုံပါပဲ....
လုပ်ယင်လည်း ပီပီပြင်ပြင်လုပ်ပါ ပေါက်ဖော်ရယ်...
ဒါကတော့ မူရင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာ (၀က်ဘ်ဆိုဒ် ) ကပုံပါ...
ဖြတ်ညှပ်ကပ်တော့ သူတို့ လည်းတော်တော်စိတ်ပါလက်ပါလုပ်ကြပုံရတယ်...ပြီးတော့ မှ
လာရောက်စစ်ဆေးကြည့် ရှု၍ လိုအပ်သည်များအားမှာကြားခဲ့ ဆိုပြီး
အောက်က မှတ်ချက်လေးတွေလည်း ကြည့် နိုင်ပါသေးတယ်...
"The number of people in the government who can do actual work are too few, they don’t even have anyone who can PS."
Ghosts! They don’t even haveashadow!
"This fully illustrates the conflict between the masses’ increasing intelligence and the government officials continuously declining morality. "
Do you still need to ask? One look and you knowatemporary worker was responsible…
Such poor quality, tomorrow he’ll be fired. After all, he’s justatemporary worker.
[Embarrassing mistakes made by companies or the government in China are often blamed on mysterious "temporary" workers.]
အောက်ကပုံတွေကတော့ ပိပိရိရိလိမ်ညာလှည့် ဖြားခြင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ တဲ့ တရုတ်အစိုးရကို ကွန်ပြုတာကျွမ်း
ကျင်သူ အင်တာနက်အသုံးပြုသူတရုတ်နိုင်ငံသားများက ထိုအစိုးရသတင်းမှာပါဝင်ခဲ့ သည့် တာဝန်ရှိသူများ
ရဲ့ ပုံကိုပင်အသုံးပြုကာ ပျက်ရယ်ပြုလှောင်ပြောင်ဖန်တီးပြထားတဲ့ အထူးပြု၊ ဖိုတိုရှော့ ဓါတ်ပုံတွေပါပဲ...
In addition to uniformly ridiculing the poorly Photoshopped government photo, Chinese netizens began creating their own Photoshops which started simple by highlighting the government officials’ apparently floatation/levitation but then became increasingly ridiculous…
အမေရိကားကိုလည်း သွားပြီးကြည့် ရှုစစ်ဆေးခဲ့ ကြသေးတယ်ထင်တယ်...
အံ့ မခန်းစရာ လကမ္ဘာကိုတောင်ရောက်ခဲ့ တယ်ထင်ပ....
ဟိုတုံးကတည်းက ကမ္ဘာကျော်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့ ပဲ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တွေ့ ဆုံခဲ့ ကြ...
အဓိပ္ပါယ်တော့ မကိကိ တို့မနိုင်းနိုင်း တို့ ကိုမေးမှရမယ်ထင်တယ်...
ဟစ်တလာရဲ့ ဂျာမနီနာဇီတပ်မတော်လည်းသူတို့ သွားပြီးစစ်ဆေးခဲ့ ကြတယ်ပေါ့ ...
အပြင်းစားအချစ် ရုပ်ရှင်ဇတ်ကားကြီးရိုကွင်းလည်း သူတို့ သွားကြသေးတယ်...
Posted by peter kyaw | at 2:04 AM |
ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကို Copy ပြီး Googleှာရှာကြည့်ပြီးကြည့်မှပဲနား
လည်တော့တယ် ၊ အခုအကိုတင်တဲ့ပုံတွေကသူတို့ဖျက်လိုက်ပြီတူတယ်
ဒီပို့စ်တစ်ခုကို ဥာဏ်မမှီဘူး။ ဓါတ်ပုံက တစ်ပုံတည်းလား...လူသေးသေးလေးတွေရယ်..ဒီစာရယ်ပဲ မြင်ရတယ်။ အောက်က ကိုပီတာ လိုက်ရေးထားတာကို အဓိပ္ပါယ်ဖော်လို့မရ ဖြစ်နေတယ်။ ဘာများမှားနေလဲ တိတော့ဝူးးးးးးးးးးးး